⁭မင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ခညောင်း သော ကိုတုတ်ကြီး: အ သုံးလုံးသင်တန်းဆင်း၏ အမြင်
ယခုတလော ပြည်ပရောက် မြန်မာ စကော်လာများ နိုင်ငံရေးသမားများခပ်စိတ်စိတ်သုံးနေသော ဝေါဟာရတစ်ရပ်မှာ
result oriented ဆိုသည့် ဝေါဟာရဖြစ်သည်။ သူတို့ ပြောသွားဆိုသွားရေးသွားကြသည်ကို တစေ့တစောင်း လေ့လာကြည့်မိတော့ Historical trend analysis ဆိုသည့်ကိစ္စနဲ့ပါတ်သက်၍ တချက်ကလေးမျှ နှုတ်မဟကြ။
တိုင်းပြည်တပြည်ကို ဦးဆောင်မည့် တိုင်းပြည်တပြည်၏ နိုင်ငံရေး စီးပွားရေးလူမှုရေး အုပ်ချုပ်ရေးအစစအရာရာကိုပြောင်းလဲပစ်မည့်အရေးကိစ္စများ ထိုအရေးကိစ္စများအတွက် အကောင်အထည်ဖော်ရန် ဆောင်ရွက်ကြိုးစား သော ပဋိပက္ခများ (၀ါ) ခေတ်ပြောင်းစနစ်ပြောင်းတော်လှန်ရေး ကိစ္စရပ်များနှင့် ထိုအရေးကိစ္စများအား ဦးစီးဦးဆောင် ရှေ့ တန်းမှ ဆောင်ရွက်မည့် လူပုဂ္ဂိုလ် အဖွဲ့ အစည်း အင်အားစု တစ်ရပ်ခြင်းစီအား historical trend analysis လုပ်ရန်ဆိုသည့်ကိစ္စရပ်အား မှိန်ဖျော့ မေ့ထားလိုကြသည်ကိုမြင်နေရ၏။
နအဖ စစ်အာဏာရှင်၏ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ ကို ၀မ်းသာအားရ ဇွတ် ရောအတင်းပါ ၀င်ရမည့်ကိစ္စဖြစ်၏ ၀င်သင့်သည့်ကိစ္စဖြစ်၏ ဟု ရေဒီယိုများအင်တာနက်စာမျက်နှာများ မှ ရေးသားပြောဆို အင်တာဗျူးပွဲများ ပေါ်ပေါက်လာကြသလို ပြည်တွင်းတွင်လဲ အချို့သော လူပုဂ္ဂိုလ်တို့ က ၀င်ရမည်ဝင်မည်ဆိုသည့် လေသံများဖြင့် ပါတီ များ ဖွဲ့ စည်းခြင်း စည်းရုံးရေးလုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်ရန်စတင်ခြင်းတို့ကို ပြင်ဆင် နေကြ၏။
ရွေးကောက်ပွဲဆိုသည်မှာ ဝေးသေး၏ ။ နာဂစ်မုန်တိုင်းကြောင့်သိန်းချီသေဆုံး နေရသော ပြည်သူလူထု၏ မိုးစိုရေစို မျက်ရည်စိုအောက်တွင်ဆန္ဒခံယူပွဲ အတုအယောင်ဖြင့် နအဖ သည် ၄င်းတို့ ဖြစ်ချင်သလို ဖြစ်အောင် သာသာလေးလုပ်သွားခဲ့သည်မှာ ပူပူနွေးနွေးရှိသေး၏။
ရွေးကောက်ပွဲအား စမ်းတိုးသင့်သည် ဟူသော ပညာတတ်များ၏ ရွှေဥာဏ်တော်စူးရောက်ပုံသည် မဆလခေတ်ဦးတွင် ပူးသတ်မည်ဆိုသောအုပ်စု၏ စိတ်ကူးယဉ်မှုနှင့် အနှစ်သာရအရ မခြား နားလှ။ ခေတ်၏ အခြေအနေ နည်းပညာတိုးတက်မှု ကမ္ဘာကြီး သေးကျုံ့ သွားရသည့်သတင်းကွန်ယက် ဖြစ်ထွန်းမှုတို့ တဖက်က ဖြစ်ပေါ်သာလွန်လာသော်လည်း ထိုအရာများနှင့် ယနေ့ ခေတ်နိုင်ငံတကာ ဆက်ဆံရေး ကုန်သွယ်ရေးစစ်ရေး သံတမန်ဆက်ဆံရေးပုံစံတို့မတူပြောင်းလဲလာသော်လည်း ထိုအရာများသည် အားသာချက်တရပ်အဖြစ် မိမိတို့မြန်မာပြည်သူများအနေဖြင့်အသုံးပြုကာ ဒီမိုကရေစီ စနစ်သစ်သို့ နအဖ ၏ နွားဖားကြိုး နှင့် တံပြာ အောက်မှ ချီတက်၍ တကယ်တန်း သွားနိုင်သည် ဟု ယုံကြည်ကြပါသလား။
တိုင်းပြည်တပြည်၏ စနစ်ပြောင်းလဲရေး ကိုရှေးရှုမည့်ကိစ္စတရပ်အား လက်လွှတ်စပယ် ငါ့စကားနွားရ အခြေအမြစ်မဲ့သော သီအိုရီများထုတ်ကာ ပဏ္ဍိတကြောင်ကြောင်နေကြသော ထိုပုဂ္ဂိုလ်တို့သတိပြုရမည်မှာ
၁။နိုင်ငံတော်တရပ်၏ အနာဂတ် သည် ပြည်သူလူထုတရပ်လုံး၏ ဘ၀ဆိုင်ရာ မျိုးဆက်ဆိုင်ရာအနာဂတ်ဖြစ်သည်။
၂။အတိုးကြီးကြီးပေးရမည့် အကြွေးဝယ်ကဒ်ပြားများအား တပြားမှ မစိုက်ရပဲ Form ဖြည့်လျှောက်သလောက် စိတ်ဓါတ်မျိုးဖြင့် ဆုံးဖြတ်ရမည့်လူတွင်ကျယ်လုပ် တစ်ပေး အလံရှူးဇာတ်ခင်းရမည့်ကိစ္စမဟုတ်။ အနာဂတ်တွင် ပေးဆပ်ရမည့်ကိစ္စ ပိုမိုနင့်ပိုးမည်မှာ သင်တို့ မဟုတ်ပြည်သူလူထုကြီးတရပ်လုံး၏ အနာဂတ်နှင့်နောက်မျိုးဆက်၏ အနာဂတ်ဖြစ်၏။
၃။သမိုင်းစဉ်လာအရနှင့်မဝေးသေးသော ပူပူနွေးနွေးဆယ်စုနှစ်များအတွင်း စစ်အာဏာရှင်၏ လုပ်ရပ်များ ကျင့်စဉ်များ ဆက်ဆံပုံများသည်သင်တို့ သိပြီးကိစ္စမဟုတ်သလော။ နိုင်ငံတော်တရပ်၏ အနာဂတ် ကိုရင်းနှီးမြှပ်နှံမည့်ကိစ္စမပြောနှင့် Stock trading ကိစ္စရပ်တွင်တောင်မှကိုယ်ရင်းနှီးမြှပ်နှံမည့်ကုန်မနီ၏ historical trend, SEC filing နှင့် management တို့ ၏ background နှင့် Brief bio data တို့ အား လေ့လာသုံးသပ်ပြီးမှ Safe ဖြစ်နိုင်သည်ဟု ယူဆရသည့် investment ဖြစ်၏ ။ ပို၍ အလေးထားရမည်မှာ နိုင် ငံအရေးနှင့်အနာဂါတ်တွင် option trading ဆန်သော စတန့် ထွင် မှုဖြင့် ကံစမ်းလေဖမ်းဒန်းစီး၍မရ Bull market , Bear Market မရှိ ကျည်ဆံ ၊ မောင်းပြန်သေနတ်၊ထောင်နှင့် အကျဉ်းစခန်းသာရှိ၏။
၄။ ထိုအရာတို့ အား ရွေးကောက်ပွဲ တွင်အနိုင်ရသောအစိုးရမှ ပြောင်းလဲပေးနိုင်ပါလိမ့်မည်ဟု သင်တို့ က မျှော်လင့်တကြီး ၀ိုင်းစောဒက တက် ညာ ၀ါးကောင်း ညာဝါးနိုင်သော်လည်း Historical trend အရပြန်လည် ကြည့်မည်ဆိုလျှင် မတရားသော နည်းဖြင့် တောက်လျှောက် ယုတ်မာ ရက်စက် လိမ်ညာလာသောစစ်ယူနီဖောင်းဝတ် စစ်ဗိုလ်ချုပ်တို့ နှင့်သင်တို့ သည်
၅။ ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲ ရလာဒ်ကို နအဖ အနေဖြင့် အသိအမှတ်ပြုအကောင်အထည်ဖော်ခြင်း ကိစ္စရပ်အား လုံးဝ မျက်ကွယ်ပြု ငြင်းဆန် သကဲ့သို့ ယခု ပြည်ပရောက် ကျွမ်းကျင်သူများ နှင့် ခေတ်ပညာတတ်ကြီးများကလည်း သံယောင်လိုက်ငြင်းဆန်ခြင်း သဘောမသက်ရောက်ပါသလော။
၅။ထိုသို့ ဆိုလျှင် မည်ကဲ့သို့ ဆောင်ရွက်ကြမည်နည်း ဆိုသည့်မေးခွန်းအားသင်တို့ ဖက်ကချက်ကျလက်ကျမေးလာနိုင်ပါသည်။ ထိုကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ ပြန်လည် ကြည့်ရှုကြရမည်မှာ
က) နိုင်ငံရေးအရ ပုဒ်မ အမျိုးမျိုးဖြင့် အကျဉ်းထောင် အချုပ်ခန်းများတွင် ချုပ်နှောင်ခံထားရဆဲဖြစ်သော
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ ဦးတင်ဦး ၊ မင်းကိုနိုင် ၊ကိုကိုကြီးနှင့်တကွ အားလုံး(အားလုံး)သော နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ လုံးဝ(လုံးဝ)ခြွင်းချက်မရှိလွတ်မြောက်ဖို့ လိုသည်။
(ခ) တောတွင်းတွင် လက်နက်စွဲကိုင် တော်လှန်နေကြလျှက်ရှိသော မ.က.ဒ.တ အပါအ၀င်နှင့် အားလုံးသော တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ အစည်းများအားရင်းနှီးပွင့်လင်းသော ဖိတ်ခေါ်မှုဖြင့် ဖိတ်ခေါ်ကာ တိုင်းပြည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက် နအဖမှ စီစဉ်ဆောင်ရွက်ဖို့ လိုသည်။
(ဂ) ထို မှ နောက်တဆင့် အားလုံးသော တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်များ ၊ အားလုံး(အားလုံး)သော ပြည်တွင်း နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်များနှင့် ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲတွင် အနိုင်ရထားသော အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ ချုပ်နှင့် အားလုံးသော ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအပါအ၀င် ပြန်လည်ကာ အခြေခံဥပဒေ တစ်ခု ရေးဆွဲရေးဖြစ်မြောက်ရန် အနည်းဆုံးအဆင့်လိုအပ်သည်။
(ဃ) အထက်ပါကိစ္စရပ်များအတွက် စစ်အာဏာရှင်မှပွင့်လင်းမှန်ကန်ရိုးသားစွာ အကောင်အထည်ဖော်ပေးရမည်ဖြစ်သည်။
အမှန်တကယ်ဆိုလျှင်သင်တို့ လည်းသိကြသည့်ကိစ္စဖြစ်သည် အလုံးစုံသောအစိုးရဖွဲ့ရေးနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးဥပဒေပြုရေးကိစ္စရပ်များသည် တရားနည်းလမ်းတကျအရဆိုလျှင် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ ချုပ်အနေဖြင့်ဆောင်ရွက်ရမည်သာဖြစ်၏။ နအဖ နှင့်လားလားမျှ မဆိုင်သောကိစ္စရပ်ဖြစ်ပေ၏။
သို့ သော်လည်း သင်တို့ ၏ အရှက်မဲ့မှုကိုသက်သက်ညှာညှာလိုက်စဉ်းစားကာ ယခုကဲ့သို့သင်တို့ ကိုးကားသလို
ရှဥ့်လဲလျှောက်သာ ပျားလဲစွဲသာဆိုသောစကားအတိုင်း မုဒိန်းကောင်နှင့် တကုတင်ထဲ အိပ်မိသော အပျိုစင် မြန်မာနိုင်ငံတော်၏ အနာဂတ်ကို သိသိကြီးနှင့် သင်တို့ ၏ အလိုကိုလိုက်၍ အနည်းငယ်စဉ်းစားမိခြင်းဖြစ်ပါ၏။
မိမိအနေဖြင့် တင်ပြသည်မှာ အနည်းတကာ့အနည်းဆုံးနှင့် အကျဉ်းချုံးစဉ်းစားချက် ကလေး တခုသာဖြစ်ပေသေး၏။ ထိုကိစ္စရပ်များဖြစ်မြောက်ရန် အတွက် Result oriented ဆိုသောစကားလုံးအား
ပလုတ်ပလောင်း ငုံထားကြသော ဆရာများ ၊ ပြည်ပရောက်နိုင်ငံရေးပုရောဟိတ်များ သတင်းဌာနများတွင် ဆရာကြီးသံနှောကာ ပါးစပ်မှ တံတွေးစင်အောင် အင်မတန်ဘိုလို ပြောဟန်ရေးပြချင်သောဆရာများ အနေဖြင့် Result oriented ထုံးနှလုံးမူကာ Psuedo-scholar များဘ၀မှ အရှက်ရှိရှိ လမ်းကြောင်းပြောင်းပြလျှင်ဖြင့် သင်တို့ ပြောသော Result oriented ဆိုသည့်ကိစ္စသည် ပိုမိုအဓိပ္ပါယ်ရှိပေလိမ့်မည်ဟုသာသုံးသပ် ဝေဖန်လေကန် လူတတ်လုပ်လိုက်ရပါသည်ခင်ဗျား။
Posted by Nyein Zay Oo at 7:34 PM
There are over 2,100 political prisoners languishing in prisons all over Burma. Free Burma’s Political Prisoners Now aims to collect 888,888 signatures before 24 May 2009, the legal date that Daw Aung San Suu Kyi should be released from house arrest. This isaunited global campaign working with overahundred groups from around the globe. The petition calls on UN Secretary General Ban Ki-moon to make it his personal priority to secure the release of all political prisoners in Burma, as the essential first step towards democracy in the country.